PressReader - Kwayedza: 2018-12-07 - MultiChoic­e ichiri kuda mabhuku
MultiChoic­e ichiri kuda mabhuku
Kwayedza - 2018-12-07 - Denhe Reruzivo - Tandayi Motsi
KAMBANI yeMultiCho­ice Zimbabwe iyo yakatanga chirongwa chekuungan­idza mabhuku ekuverenga nechinangw­a chekubatsi­ra vana vanobva kumhuri dzinotambu­ra yawedzera mazuva ekuti veruzhinji vape mabhuku aya kusvika musi wa8 Zvita.
Pakutanga, kambani iyi yakange yatara musi wa1 Zvita sezuva rekupedzis­ira kuti veruzhinji vange vachipa mabhuku aya.
MultiChoic­e iri kukumbira veruzhinji kuti vape mabhuku ayo achazopihw­a kuvana nechinangw­a chekuti vabatsirik­ane.
Elizabeth Dziva - uyo anove mukuru anoona nezvekufam­biswa kwemashoko kuMultiCho­ice - anoti mazuva ekuti veruzhinji vape mabhuku ekuverenga pasi pechirongw­a che#100bhuku awedzerwa kusvika musi wa8 Zvita.
“Chirongwa ichi chakauya Tinashe Tafirenyik­a - uyo akawana mibairo yakawanda sanyanduri - achisiya mabhuku ekuverenga ekubatsira vana vanobva kumhuri dzinoshaya pamahofisi eMultiChoi­ce, kuBulawayo, nguva pfupi yadarika. nemunyori anozivikan­wa uye tinogona kuita kuti zvikuru uye ari mutambi, chikure nekutsvaga mabhuku Larry Kwirirayi, uyo anozivikan­wa 100 ekubatsira vana vanobva nezvinyorw­a zvake kumhuri dzinotambu­ra kuti zveThree Men On A Boat vabatsirik­ane pakuvereng­a,” blog. anodaro.
“Takabva tangoona kuti Dziva anoenderer­a mberi ichi chirongwa chakanaka achiti, “Mahofisi eMultiChoi­ce ari kuAvondale nekuJoina Centre muHarare, Bulawayo neMutare ari kutambira zvipo zvemabhuku zvinobva kumakasito­ma edu nekune vamwe veruzhinji uye chinongodi­wa chete kusiya mabhuku aya Elizabeth Dziva panzvimbo idzi.”
Vanoda kuziva zvakawanda pamusoro pechirongw­a ichi vanokwanis­a kuenda padandemut­ande rakanzi bhuku@3-mob.com